Amazon Kindle nwere ọkụ dị n'ime ya, ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume ịkwalite Kindle [Nkọwapụta] | Akụkọ akụrụngwa
Amazon Kindle nwere ihe ejikọtara ọnụ, ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume melite Kindle
Mgbe ngwaahịa dị mma nke na n'agbanyeghị oke ịdị mfe ọ na-adịgide ruo ọtụtụ afọ, mmadụ chere na ikekwe ihe kachasị adaba bụ itinye isi nke: Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, emetụla ya aka. Ma Amazon bụ ụlọ ọrụ dị ize ndụ ọ naghịkwa achọ ilegharị anya.
Belọ ọrụ Jeff Bezos emelitere isi Amazon Kindle iji gbakwunye ọkụ, na-eme ka ngwaahịa dị mma maka njirimara ya. Anyị nwere aka anyị na nke mbụ Amazon Kindle nwere ọkụ jikọtara ọnụ, nọnyere anyị ma chọpụta otu ọ dị na nyocha anyị zuru ezu.
Amazon nwere n'etiti ngwaahịa ya dị "ọnụ" Kindle, ya bụ, ụdị kachasị dị iche iche nke ka zuru oke na ọtụtụ ndị mmadụ nkịtị, nke mere na ọ bụ otu n'ime ndị kachasị ere site na ụlọ ọrụ North America, yana anyị anaghị ata ha ụta. Anyị na-ewetara gị inddị ahụ nwere ọkụ agbakwunyere na Eprel 10 ka ị wee nwee ike ịhụ n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụrụ na ọ bara uru itinye ego ahụ, n'agbanyeghị na anyị nwere ike ịgwa gị na ọ hapụla anyị ezigbo uto n'ọnụ anyị, lelee ya ileba anya Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. site na € 89,99 ọ bụ ezie na anyị na-akwado ka ị mụrụ anya maka onyinye ndị ga-eme n'ọdịnihu.
1 Design na ihe: The ọma ma ọ bụrụ na mfe, ugboro abụọ ka mma
2 Nka na ụzụ: Ihe zuru ezu iji gụọ na-enweghị njedebe
3 N'ihu ihu na njirimara onye ọrụ
Design na ihe: The ọma ma ọ bụrụ na mfe, ugboro abụọ ka mma
Anyị na-ahụ ngwaọrụ ejiri polycarbonate mee, plastik na-adị ndụ, nke a na-enye ya mgbakwunye nke nguzogide na ọkụ nke anyị na-enweghị ike ịchọta na ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọrụ mmetụta ahụ bụ "obere ego". Anyị ekwesịghị ichefu na ihe anyị ji n’aka bụ akwụkwọ electronic. Anyị nwere ibu ibu naanị gram 174 maka ogwe anụ ọhịa anụ ọhịa na akụkụ isii nke 160 x 113 x 8,7 millimeters, Ọ dị gịrịgịrị, nwee akụkụ ihuenyo dị mma ma dabara adaba na aka, anyị nwere ike ịgụ naanị iji otu n'ime ha.
Ibu ibu: 174 grams
Akụkụ: X x 160 113 8,7 mm
A tọhapụrụ ya na agba abụọ: Black na White. Ọ dịghị ebe anyị ga-ahụ bọtịnụ, ebe ọ bụ na ọ nwere naanị na ala, na-esote njikọ microUSB (gịnị kpatara USB-C na 2019 zuru ezu?) A ga-eji ya mee ihe. Nke a bọtịnụ ga-ihu ọma ịbụ kpochidoro usoro nke ahụ ga-etinye ngebichi na nkwụnye, yana iji gbanyụọ ya kpamkpam, maka ndị ọzọ anyị ga-agagharị site na iji mmetụ aka. Obere osisi ndị a na-ekwusi ike karịrị nke zuru ezu iji zuru ike mkpịsị aka aka yana na ha anaghị egbochi oghere akwụkwọ, nke a nwere ekele dị ukwuu.
Nka na ụzụ: Ihe zuru ezu iji gụọ na-enweghị njedebe
Dị ka anyị kwuru, anyị nwere ihuenyo nke sentimita isii nke ink kọmputa, Nke a ga - enyere anyị aka ịghara ịta ahụhụ n’ụzọ nkịtị n’ọnọdụ ọ bụla, ọ dịka o kwere omume ịgụ akwụkwọ ọdịnala. Ọbụna mgbe anyị na-eji nke gị 4 LEDs n'ihu ọkụ anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ teknụzụ a nke ga-eme ka anya anyị dị mma yana karịa ihe niile ọ ga - ada mbà ma anyị ga - etinye oge anyị ga - eji n'ihu ya, ezigbo obi ụtọ.
Ihuenyo: 6 sentimita asatọ na mkpebi 167 DPI
Integrated dimmable 4-Ikanam ìhè
Nchekwa: 4 GB
IHE: Na tiori ọ nwere Bluetooth na nke a kapịrị ọnụ na ntuziaka onye ọrụ, agbanyeghị, ọ dị ka ọ gaghị arụ ọrụ na Spain ma.
Mkpebi ihuenyo bụ pikselụ 167 kwa anụ ọhịa, anyị ga-asị na ezughi oke ma ọ bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nwute ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọ bụ akwụkwọ elektrọnik, nke zuru oke ma ọ bụ karịa karịa. Nchekwa nchekwa bụ 4 GB nke na-enweghị ike ịgbasa site na kaadị microSD ma ọ bụ ụdị nchekwa ọ bụla dị na mpụga. Itinye akwụkwọ ole na ole anyị achọpụtala na anyị ga-enwe ihe dịka 3 GB nke nchekwa ozugbo anyị wepụrụ sistemụ arụmọrụ na ebe nchekwa. Ikekwe ọ bụ isi ihe ị ga-eburu n'uche ma ọ bụrụ na anyị echekwa ọtụtụ akwụkwọ, ihe yiri ihe na-enweghị isi na-eche na ekele maka njikọ WiFi ya anyị ga-enwe ha mgbe niile n'ọbá akwụkwọ Amazon anyị.
N'ihu ihu na njirimara onye ọrụ
Amazon maara otu esi emeri anyị na Sistemụ arụmọrụ, otu ihe atụ bụ Fire TV nso. Anyị nwere interface dị mfe iji, dị nghọta, ọdịiche dị n'etiti ịrịọ arịrịọ nke mmegharị yana ogologo oge ọ na-ewe iji pụta na ihuenyo ahụ pụtara ìhè, mana ọ bụkarị na kọmputa kọmputa. Anyị nwere ohere ọbá akwụkwọ ngwa ngwa, njikọ WiFi kwụsiri ike yana ikike ịzụta akwụkwọ site na Amazon, maka nke ahụ naanị anyị ga-ahazi ya dị ka egosiri na vidiyo nke soro nyocha a.
Anyị nwere ike ịkọwapụta ederede ahụ, chọọ okwu na nkọwapụta, tụgharịa ụfọdụ ndị anyị na-amaghị n'asụsụ ndị ọzọ wee mezie nha ederede, n'ihi na nke a ka anyị ga-akpọ ụdị ebe njikwa, ya bụ, anyị agaghị ahapụ peeji anyị na-agụ, agbanyeghị, sistemụ ndenye ọwa akpaghị aka ga-echetara anyị peeji anyị nọ na ya na-enweghị ọtụtụ nsogbu. Ihu ihu na-agbanwe agbanwe na nchapụta, nke ọma na nke ziri ezi, nke na-eme ka o kwe omume ịgụ n'abalị na akwa ma ọ bụ na gburugburu ọchịchịrị dị ka ụgbọ elu na ụgbọ oloko na-enweghị oke mkpa igbochi onye ọ bụla nwere ọkụ mpụga, nke ahụ dị mma. Na mgbakwunye, iji ọkụ a anaghị egbochi anya ọ bụla dịka ule m.
Ọzọkwa, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, Amazon na-enye nnukwu mkpuchi na ngwa maka Amazon Kindle anyị ozugbo na njikọ a.
Amazon na-ekwe anyị nkwa ihe dị ka izu 4, na-ewere dị ka ntụnyere agwa omume ịgụ nke ọkara elekere kwa ụbọchị yana njikọ ikuku na-apụ apụ na ihie na-enwu enwu na ọkwa 13. Na iji ọkọlọtọ ejiri njikọ WiFi rụọ ọrụ, nkezi ọgụgụ nke ihe karịrị otu awa na nchapụta nke ike kachasị anyị jisiri ike nweta izu abụọ iji mee ihe na otu ụgwọ, ya mere, obodo kwụụrụ onwe ya (chaji ya chaja ihe dị ka awa atọ na chaja 5V 2A) karịrị iji gụọ na-enweghị nsogbu. Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị anọghị n’ụlọ ma anyị chọrọ ịgbatị ya, anyị nwere ike belata nchapụta ma wepụ WiFi iji kwụsị igbapu.
Ọ dị mma, ọkụ na-eguzogide ọgwụ
Ọkụ ahụ zuru oke ma ọ naghị agwụ gị ike
Amazon na-ebuputakarị onyinye nke na-ebelata ọnụahịa
Sistemụ nrụọrụ dị mma iji gụọ na-enweghị oke
Jiri eriri microUSB kama iji USB-C na 2019
Agunyeghi ike nkwụnye ọkụ
Ikwesiri ịmatakwu ihe eji eme ihe
O yiri ka ọ bụ mmeghari ohuru maka Amazon Kindle, nke na-echebara ọnụahịa ya echiche nakwa na emeliteghị ya kemgbe 2016 Enweghị m nhọrọ ọ bụla karịa ịkwado nke a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. n'ihu nke ọdịnala ọdịnala na-enweghị ọkụ nke dị ihe dị ka euro iri. Tụkwasị na nke ahụ, Amazon ga-ejedebe na-ebupụta onyinye na-eme ka ngwaọrụ a dị nnọọ mma n'oge na-adịbeghị anya, ya mere nọrọ na-ekiri.
Amazon Kindu na-ewu na-ìhè
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Amazon Kindle nwere ihe ejikọtara ọnụ, ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume melite Kindle
Esi zụta Ihe Nlekọta